FBS ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး: VIP ပါတီအမှတ်တရများ
သြဂုတ် ၂၇တွင် FBS အဖွဲ့သည် Sentosa၊ စင်္ကာပူတွင် ဇိမ်ခံ တော်ဝင်ပင်လယ်စင်ရော် ရွက်လှေပေါ်မှာ FBS ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြိုင်ပွဲ၏ ကံထူးရှင် ၂၅ဦးကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်၊ အီတလီ၊ မော်ဒိုက်၊ ဘရာဇီးနှင့် တောင်အာဖရိကမှ ထိပ်တန်း-ပါတနာများ သူတို့အောင်မြင်မှုကို အောင်ပွဲခံရန် အတူတကွစုဝေးနေကြသည်ကို တွေ့ရတာ ဝမ်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲနှင့် BBQ ဘူဖေးများပါဝင်ပြီး၊ FBS CEO နှင့် COOမှ နှုတ်ဆက်စကားများကို ကုန်းပတ်ထိပ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ပါတနာတစ်ဦးစီတိုင်းကို တွေ့ဆုံပြီး၊ ဆုကို ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ရတာကို ဝမ်းမြောက်ခဲ့ပါသည်။
နေဝင်ချိန်ဆီရွက်လွှင့်နေတဲ့ ဇိမ်ခံရွက်လှေကြီး၏ ရွက်လွှင့်မှုအောက်ရှိ အဆုံးစွန်သော VIP ပွဲ - ကံထူးရှင်များအတွက် တကယ့် အံဖွယ်လက်ဆောင်များ! Kunjung Wida သည် တစ်ညနေလုံး၊ နောက်ဆုံးထွက် သီချင်းများဖြင့် သီဆိုကခုန်ခဲ့ပါသည်။ ညနေခင်းတစ်ခုလုံး ကြီးကျယ်တဲ့ ဂိမ်းများနှင့် ဆုများ၊ အရသာရှိသော စားသောက်ဖွယ်ရာ၊ အကယှဉ်ပြိုင်မှုများ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်အခမ်းအနား၊ ရယ်မောမှုနှင့် အဆုံးစွန်သော ပျော်ရွှင်မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်!
ဒီကံထူးတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ အားလုံးအတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်! FBSနှင့် ရောင်းဝယ်ပါ၊ နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ရအောင်!
ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများကို ခုပဲ ဆန်းစစ်လိုက်ပါ